Ny klinika sy ny mpiara-miasa aminay - Vondt.net
Ny toeram-pitsaboana sy ny mpiara-miasa
NY CLINICS ARETINA
- Ny fahitantsika? Miasa foana izahay mba ho matihanina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana tsara indrindra amin'ny hozatra, tendrona ary fifangaroana
VondtKlinikkene dia tambajotra matihanina amin'ny toeram-pitsaboana tsy mitsaha-mitombo miaraka amin'ny faniriana hanana fahaiza-manao avo lenta amin'ny fanombanana, fitsaboana ary fiofanana. Ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hahita fampahalalana bebe kokoa momba ny toeram-pitsaboana mifandraika amin'izany izahay, ary koa ireo mpiara-miasa. Ny vinanay dia ny hanananao fahatokiana fa mahazo ny traikefa amin'ny marary tsara indrindra omen'ny matihanina mpitsabo nahazo alalana ampahibemaso manana fahaizana manokana momba ny hozatra, hozatra ary tonon-taolana.
Lambertseter: Ivontoerana Chiroprakitra any Lambertseter sy fitsaboana ara-pahasalamana
Eidsvoll: Ivotoerana Chiropraktika ara-pahasalamana Eidsvoll sy Physiotherapy
Vavahady Wergelands 5, 2080 Eidsvoll (Sundet)
Eidsvoll: Råholt Chiropractor Center sy Photherapyotherapy
Salama, Alexander Andorff no anarako. Fitsaboana kiropractika sy mpitsabo amin'ny laoniny biomekanika.
Izaho no talen'ny famoahana ny Vondt.net sy Vondtklinikkene - ary miasa ao Ivontoerana Chiroprakitra any Lambertseter sy fitsaboana ara-pahasalamana. Amin'ny maha-fifandraisana voalohany maoderina amin'ny aretina musculoskeletal, tena mahafaly ny manampy ny marary hiverina amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa.
Ny fandalinana feno sy ny fomba maoderina amin'ny fitsaboana dia ny soatoavina fototra ho an'ny Pain Clinics - sy ireo mpiara-miasa aminay. Miara-miasa akaiky amin'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana sy GP izahay hanatsarana ny vokatra. Amin'izany no ahafahantsika manome traikefa amin'ny marary tsara kokoa sy azo antoka kokoa. Ny soatoavintsika fototra dia misy hevi-dehibe 4:
Fitsaboana maoderina sy miorina amin'ny porofo
Ilay marary mifantoka - foana
Vokatra amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao ambony
Miaraka amin'ny mpanaraka maherin'ny 85000 ao amin'ny media sosialy, ary koa mpitsidika manakaiky ny 15 tapitrisa isan-taona (hatramin'ny martsa 2022), dia tsy mahagaga ny maro raha mamaly isan'andro ny fanontaniana momba ireo mpitsabo natolotry ny firenena izahay raha toa ka sarotra ara-jeografika izany. tongava aminay. Indraindray isika dia mahazo fanontaniana be dia be ka mety ho sarotra ny mamaly azy rehetra, ka izany no antony namoronantsika an'ity fizarana ity - izay hampiarahanay tsikelikely, ankoatry ny toeram-pitsaboana misy anay manokana, ny tolo-kevitray ao anatin'ireo mpitsabo manana alàlana ampahibemaso voatondro ampahibemaso ho anao. faritra akaiky.
Marary: Fotoam-boky ho an'ny hozatrao sy ny aretin'ny tonon-taolana?
Raha te-hamaky bebe kokoa momba ny toeram-pitsaboana na hamandrika fotoana ianao dia azonao atao ny manindry ireo rohy etsy ambony. Ny fanendrena dia atao amin'ny tranokalan'ny klinika tsirairay avy. Aza misalasala mifandray aminay raha manana fanontaniana ianao na toy izany.
Physiotherapist na Chiropractor: Miaraha miasa aminay?
Ny tobim-pahasalamanay dia afaka manondro ny fiaraha-monina tsara, ny lisitry ny marary be atao, ny fahafahana mahazo vola tsara ary ny sehatra lehibe hianarana. Mitady matihanina mahay foana izahay - ary matetika manana fahafahana na dia matetika aza tsy mila mandefa toeran'ny asa noho ny olona manao fangatahana tsy nangatahana. Ny toeram-pitsaboana fanaintainana dia manana fifantohana manokana amin'ny kiropraktika sy physiotherapy maoderina, fa izahay koa dia tena liana amin'ny fihainoana avy amin'ny naprapaths, osteopaths ary masseurs. Mba hifandraisana aminay dia mangataka izahay mba handefa hafatra mivantana any amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana etsy ambony. Manantena ny hihaino anao izahay.